Burmese.asia – Page 274 – Media & Entertainment
“ကိုဗစ်​ရောဂါကြီးကို ကပ်​ရောဂါအသွင်မဖြစ်​ရ​အောင် အတူတကွတိုက်ထုတ်ကြရ​အောင်လို့ ​ပြောလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု”
By Myo Min HtetPosted on April 3, 2020
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်​ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး​တွေထဲကမှ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ တရင်းတနှီးမိတ်ဆက်​ပေးဖို့မလို​လောက်ပါဘူး​နော်။ ပိုင်ဖြိုးသု​​လေးရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့”မီ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက​တော့ ပရိသတ်​တွေကြားမှ ​​ရေပန်းစား​အောင်မြင်​ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုလည်းမမှား​လောက်ပါဘူး။ သူမဟာဆိုရင် သရုပ်​ဆောင်မှုပိုင်းမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို စိတ်ထဲနှစ်ကာ သရုပ်​ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသု​လေးက​တော့ အခုCovid-19​ဖြစ်ပွား​နေချိန်မှာ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့ဗီဒီယို​လေး​တွေကို တင်​ပေး​လေ့ရှိပါတယ်။ ဧပြီလ(၂)ရက်​နေ့မှာ ပိုင်ဖြိုးသု​လေးက”#အိမ်မှာပဲနေပါ […]
မိန်းခလေးတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ Single Mother ယဉ်ခိုင်(သဲသဲ)
2.2.2010 မှာ လက်ထပ်ခဲ့တယ်24.1.2019 မှာ ကွာရှင်းခဲ့ပြီ(သူမနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ)9နှစ်ပြည့်ဖို့ ၈ရက်ပဲလိုတော့တယ်. Anni Dateလဲ မှတ်ထားမယ် မထင်နှစ်ယောက်လုံးချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်. အစပိုင်းမှာအရမ်းတွေသာယာပီးအဆင်ပြေခဲ့တယ်။ တပ်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ တပ်ထဲကသူတွေပဲသိတယ်. ခေတ်ရှေ့ပြေးပီးဖလန်းဖလန်းနေခဲ့တဲ့ကျမ တပ်ထဲမှာ အဘွားအိုလေးလိုနေခဲ့ရတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ သူငွေသုံးကြမ်းတာလေးက လွှဲရင်ပေါ့။ […]
“ဒီလိုတွေ ဖြစ်မယ်မှန်းသိရင် ငယ်ငယ်က ဆရာဝန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ နေမင်း”
သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းခံရတဲ့ မင်းသားနေမင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ နေမင်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှီပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ကာ အချစ်ရေးမှာတော့ လူပျိုကြီးလို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးခေါ်ခံနေရတဲ့ […]
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ပိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ မအေးသောင်း
မိသားစုဝင်အချင်းချင်း ဒုက္ခမရောက်စေဖို့ ပြောလာပါတယ်။မအေးသောင်းဟာ ကိုယ်ခံအားကောင်းကောင်း မရှိလှတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို COVID-19 မကူးစက်ရလေအောင် ပိုစောင့်ရှောက်သင့်တယ်လို့ သတိပေးစကားဆိုလာပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး မအေးသောင်းကတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို COVID-19 မကူးစက်အောင် ကာကွယ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်မိသားစုကို […]
ကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အားကစားသမား၊ ကိုဗစ်-၁၉ကြောင့် ရုတ်တရက်သေဆုံး
By Myo Min HtetPosted on April 2, 2020 April 2, 2020
မာရသွန်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်လို့ အများကထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ ကိုဗစ်-၁၉ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘဲ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိပါတယ်။ အဆိုပါ မာရသွန်အားကစားသမားရဲ့နာမည်ကတော့ Mauricio Kazuhiro Suzuki ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၂၆)နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။Mirror သတင်းမှာ ဖော်ပြချက်အရမှာတော့ Suzuki ဟာ […]
ညောင်(၁၀)ပင်အဓိဌာန်ရဲ့ထူးခြားမှုတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်
အဘရုက္ခစိုးရဲ့ ပုံကို သေသေချာချာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။နွေးနွေးချစ်ဖွယ်ကတော့ ဘာသာရေးကို ကိုယ်တိုင် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာ ထူးခြားမှုတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုတော် နွေးနွေးချစ်ဖွယ်ကတော့ ဘုရားတရားကို တစိုက်မတ်မတ် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရင် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးတွေက ထူးခြားတယ်လို့ […]